Amazon dia lany amin'ny Apple TV 4k ora aorian'ny namarotana azy ireo | Avy amin'ny mac aho
Amazon dia lany amin'ny Apple TV 4k ora aorian'ny namarotana azy ireo
Nanao fanitsiana i Amazon sy Apple. Nandritra ny taona 2017, nambara fa hivarotra indray ny Apple TV amin'ny tranokala fivarotana entana i Amazon. Tsy nijanona teo ny fifampidinihana, satria mandritra ny daty vitsivitsy dia hitantsika ny atin'ny Prime Video amin'ny Apple TV an'ny taranaka fahatelo sy faha-3, noho ny fampiharana Amazon vao navoaka tato amin'ny Apple TV. Fa kosa, ny iray amin'ireo fifanarahana dia tsy nandeha araka ny nampoizina. Miresaka momba ny habetsaky ny Apple TV 4k izay nananan'i Amazon amidy izahay. Raha mamaky tsara ianao, dia nisy, vita izany.
Tsy ny firenena rehetra no amidy ny Apple TV 4k amin'ny pejy Amazon. Ohatra, tsy miseho eo amin'ny pejy Espaniola izy io. SAINGY Raha mankany amin'ny tranokala Amazon iraisam-pirenena ianao, misy hafatra mampitandrina anay fa tsy misy ny vokatra. Ny hafatra dia manondro ny "lany andro vetivety".
Mba hahatakarana izany dia tsy maintsy jerentsika amin'ny fomba fijery ilay raharaha. Ity fitaovana multimedia ity dia mahazo atiny bebe kokoa any Etazonia noho ny any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Ny fizarana vao navoaka Fanatanjahantena mivantana, dia mbola tsy misy any amin'ny ankamaroan'ny firenena.
Etsy an-danin'izany, ampahan'ny isan-jaton'ny mpampiasa Amazon any Etazonia no nanao fifanarahana tamin'ny Prime Video. Noho izany, ireo serivisy vaovao roa ireo dia nanjary nitombo ny varotra ary nitombo ny fangatahana ny serivisy horonantsary Amazon. Raha ny marina, andro maromaro izay no lasa Nanambara i Apple fa tsy misy ny maodely 64 Gb mandritra ny herinandro 4-5 hafa.
Amin'ireto fihetsika ireto, Apple sy Amazon dia nahita ny synergie azon'ny fifanarahana nifanaovan'izy ireo sy ny dolara an-tapitrisany maro ho very hatramin'ny Oktobra 2015, rehefa tsy nifankahazo intsony izy ireo rehefa tsy nivarotra Apple TV intsony. Apple, amin'ny lafiny iray, dia nanondro fa tsy misy toerana ho an'ny serivisy horonantsary Amazon. Voavaha avokoa izany rehetra izany rehefa ny fifanarahana dia nambara tamin'ny fivorian'ny fivoriambe farany tamin'ny volana Jona lasa teo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Amazon dia lany amin'ny Apple TV 4k ora aorian'ny namarotana azy ireo
Ovao ny Apple Watch ho famantaranandro
Hankafy ny Apple Pay i Polonina amin'ny fiandohan'ny taona 2018